ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉ ရက်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်နိုင်ဦး ဦးဆောင်၍ ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (RCEP) သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် အစိုးရဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ယနေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး ဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ အရာထမ်းများ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဦးစီးဌာနများမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အဆင့်မြင့်အရာထမ်းများ စုစုပေါင်း (၆၅) ဦး တက်ရောက်သည်။
ရှေးဦးစွာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် RCEP သဘောတူ စာချုပ်ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ (၁၅) နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဝန်ကြီးများက နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ၏ ရှေ့မှောက်တွင် Virtual ပုံစံဖြင့် လက်မှတ် ရေးထိုးခဲ့ပါကြောင်း၊ RCEP သဘောတူစာချုပ်သည် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လွတ်လပ်သည့် ကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ်များတွင် တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ယခင်ထဲက လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှု သဘောတူစာချုပ် ၆ ခုတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်၍ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုနယ်မြေ၏ အကျိုးကျေးဇူးများကို ခံစားရရှိနေပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ RCEP စာချုပ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သဖြင့် မိမိနိုင်ငံ၏ ပို့ကုန်များ မြှင့်တင်နိုင်ခြင်း၊ သွင်းကုန်အစားထိုးလုပ်ငန်းများကို ဖိတ်ခေါ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ၍ ကုန်သွယ်မှု လိုငွေလျှော့ချနိုင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ မြှင့်တင်နိုင်ခြင်းဖြင့် နှစ်စဉ် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာ ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှတစ်ဆင့် အဆင့်မြင့် နည်းပညာများရရှိခြင်း စသည့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပိုမိုရရှိမှာဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆက်လက်၍ RCEP သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အဓိကကျသည့် အစိုးရနှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများသို့ အသိပေး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်က ဦးဆောင်သည့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍအသင်းအဖွဲ့များသို့ လည်း စာချုပ်ပါ အခန်းအလိုက် ပြဋ္ဌာန်းချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည့် ဆွေးနွေးပွဲ များကို ကျင်းပပြီးဖြစ်၍ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၏ အကြံပြုချက်များနှင့် လိုလားချက်များကို သိရှိပြီး စာချုပ်အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ ကျင်းပသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲက RCEP ကို ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍက အောင်အောင်မြင်မြင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်အတွက် လိုအပ်သည်များကို အကူအညီ အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေရေးအတွက် အစိုးရဌာနများက ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဌာနအလိုက် မိမိတို့ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများတွင် လိုအပ်သည့် နည်းပညာအကူအညီများ၊ မူဝါဒနှင့် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း‌ပေးရမည့် ကိစ္စရပ်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ညှိနှိုင်းသွားရန် ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက မိမိတို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးရမည့် လုပ်ငန်းများအပြင် လိုအပ်သည့် နည်းပညာအကူအညီများအတွက် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေသတွင်း အဖွဲ့အစည်း များထံမှ ရယူနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ RCEP သဘောတူ စာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အမျိုးသားအဆင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲနိုင်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ဦးဆောင်ကော်မတီနှင့် လုပ်ငန်းကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရေးတို့ကို အထက်အဖွဲ့အစည်း အဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြအတည်ပြုချက်ရယူ၍ ဆက်လက် ဆောင်ရွက် သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ RCEP သဘောတူစာချုပ် အသက်ဝင်ရေးကို ထိုင်းနိုင်ငံက ဆောင်ရွက် ပြီးဖြစ်၍ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့်လည်း အဆိုပါ စာချုပ်အသက်ဝင်ရေးနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေးကို အလျင်အမြန် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာန များက စာချုပ်အသက်ဝင်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ဒုတိယဝန်ကြီးက RCEP သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အတွက် ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအစဉ်များကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်လာသူများက အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်း စဉ်များအပေါ် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်ချက်များကို မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဒုတိယဝန်ကြီးက ပြန်လည် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပါသည်။
အဆိုပါ RCEP သဘောတူစာချုပ် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက် စာချုပ်ပါ ကဏ္ဍအလိုက် အစိုးရဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လ ပထမပတ်အထိ ဆက်လက် ကျင်းပပြုလုပ် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ အကူအညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် မြန်ဆန်စွာ အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေမည့် စီမံကိန်းများ (Quick Impact Projects) အတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU) များ ဆောလျင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ တတိယအကြိမ် ထမနဲထိုးပွဲ ကျင်းပ
(၃၉) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်း အဝေးသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ Video Conferencing ဖြင့်တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ကြေညာချက် (၁/၂၀၂၁)
COVID- 19 ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် စီးပွားရေးသက်ရောက်မှုများအပေါ် ကုစားရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင် လွယ်ကူချောမွေ့စေရေးညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ
e-Government စနစ်ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများအား တာဝန်ရှိသူများကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဉီးအောင်နိုင်ဉီးက ဝန်ထမ်းများနှင့်တွေ့ဆုံ၍ အမှာစကားပြောကြား
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဩစတေးလျနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Ms. Andrea Faulkner အား လက်ခံတွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေး
နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းအပါအဝင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း အသစ် ၁၄ ခု ကို မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က ခွင့်ပြု
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဗြိတိန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Dan Chugg အား လက်ခံတွေ့ဆုံ၍ ပညာရေးနှင့် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္ဍတွင် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဆွေးနွေး